ZAHRA NAALEEYE: “Soomaalida ayaa farta lagu fiiqaa, oo waxaa la leeyahay Kenya ama Soomaaliya ayeey gabdhaha geeyaan” [WARAYSI] | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii ZAHRA NAALEEYE: “Soomaalida ayaa farta lagu fiiqaa, oo waxaa la leeyahay Kenya...
ZAHRA: Haweenka Soomaalida ilaa 50-jir xittaa 40 jir aan iraahdo waa wada gudan yihiin, waaya-aragnimada ayaa dadka ku yarayd, gabadha haddii aan la gudin lama guursanaayo, sababtuna waxay ahayd; waxay un iska ahayd caado la iska raacay, waxaa jirta maahmaah duug ah oo Soomaalidii hore hal-hays u ahayd. “Caada la diidaa, carra ALLEEY leedahay” 30-kii sanno ee ugu dambeeyey dardartii iyo xawaarihii uu gudniinku ku socday wuu hakaday, inkastoo oo si xoog leh baadiyaha loogu gudo gabdhaha, haddana caasimada Muqdisho xittaa waxaa la ii sheegay in gudniinku ay caadi ka tahay waxay leeyihiin fircoon ma sameyno, dadka sidaa samaynaya iyaga xittaa daliil diimeed ma hayaan. Dalkan Holland, culimadii ayaa ka hadashay oo dadka ka wacyigelisay in gudniinka gabdhaha aanu diin wax shaqa ah ku lahayn, waxaa nala mid ahaa dalal dhowr ah oo Afrikaan u badan, waxaa ka hadlay culumaa’udiin isugu jira Marookaan, Turki, Aljeeriya, Tuuniisiya, kuwaas oo dadka u sheegay in aysan ku kadsoomin.
Previous articleLa kulanka Ra iisal wasare Rooble oo Lacag Noqotay
Next articleXubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhiga Booliska degmada Jalalaqsi
Sanjay dutt oo laga helay cudur halis ah